Mutengo Wakaderedzwa !! 3 imba yekurara iri kutengeswa muAlameda, CA
Real Estate Listings: » Real Estate Agent Directory » Real Estate Agents » US » Mutengo Wakaderedzwa !! 3 imba yekurara iri kutengeswa muAlameda, CA1
YADeredzwa! Imba inoyevedza ine dzimba mbiri dzekurara, mbiri yekugezera yakazara, uye imba yekudyira. Dhizaini tenzi yekurara inotarisisa yakanaka yekumashure yadhi. Yakagadziridzwa kicheni uye yekugezera. Chikamu chepasi chakapedzwa. Nzvimbo huru padyo nezvikoro zvepamusoro, mahombekombe, maresitorendi uye zvitoro. Kufamba mamaki ndeye 78! 3 yekurara, 2 Bath1184 Sq FtLot Saizi 2,990Iye Imwe FireplaceYear Yakavakwa 1912 Yakapihwa pa $ 750,000. Fonera kana Bvunza mibvunzo kuna Audrey L. James, CalBRE License # 01502402 Chinyorwa chakapihwa neruremekedzo rweMayling Trinh, BHGRE- Reliance Partners BRE # 01407438
Regended on 24. Feb 2017
Bata mushambadzi 510-421-xxxx
Regended on February 24, 2017